Indlela yokufumana ukuthungwa kwegolide kwiPhotoshop: landela la manyathelo alula | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 12/05/2022 17:00 | Izixhobo zoYilo, Photoshop
Umthombo: Zonke iiNgxowa-mali
Kwi-Photoshop, asinakuhlela kuphela imifanekiso kwaye siyichukumise kwakhona ukuze ibukeke njengemifanekiso yobuchwephesha.
Kodwa ukongeza, sinazo nezinye izixhobo ezininzi ezenza kube lula ukuyila, yezinye izinto ezinokuba nomdla kuthi. Yiyo loo nto kule posi, besifuna ukuthatha elinye inyathelo eliya phambili, kwaye ndikubonise enye into malunga nePhotoshop ngale ndlela.
Siza kuthetha nawe malunga nokuthungwa kwaye ngaphezu kwako konke, siya kukubonisa isifundo esichazayo, apho uya kuba nokufikelela ukuze ukwazi ukuyila igolide yakho., silandele emanyathelweni ethu. Kuba singafuni kukugcina ixesha elide, siza kucacisa ngakumbi malunga nelizwe lezinto zokuthungwa.
1 Ubume: Iimpawu ezilula
2 Isifundo: Uyila njani iGold Texture kwiPhotoshop
2.1 Inyathelo 1: Uxwebhu
2.2 Inyathelo 2: Yongeza ezinye izinto
2.3 Inyathelo lesi-3: Ngenisa ukwakheka kwakho kwaye uhlengahlengise
2.4 Inyathelo lesi-4: Faka isicatshulwa kwisicatshulwa
2.5 Inyathelo lesi-5: Thumela ngaphandle ukuthungwa okanye ukwakheka
3 IiWebhusayithi zokukhuphela imizobo
3.5 Ubume beNinja
Ubume: Iimpawu ezilula
Ngaphambi kokuba siqale kwihlabathi le-Photoshop, kubalulekile ukuba uqonde into esiza kuyenza. Ukwenza oku, ekubeni i-protagonist yeposi iya kuba yigolide yegolide, sifuna ukukuchazela kwangaphambili ukuba yintoni igama elithi texture kunye nezinye ii-typologies eziqulunqwe.
Ubume ibhekisa kuhlobo lomba apho iboniswe khona, umphezulu wendawo enikiweyo okanye okusingqongileyo. Ngokomzekelo, kuba ngathi sibona iinkcukacha zento nganye kufutshane. Makhe sicinge ukuba sinakho ezandleni zethu ilogi yokhuni, ukuthungwa kuya kuba yinto nganye yezoncedo kunye neefom ezinomthi.
Zihlelwa ngokweendidi ezahlukeneyo, nangona eyona ixhaphakileyo kukuzifumana njenge; ubume obubonakalayo kunye noburhabaxa obubambekayo.
Ukuthungwa okubonakalayo koko kuthungwa oku. njengoko ilizwi layo libonisa, sinokuxabisa ngokubona. Kukumila kwento esiqhele ukuyibona xa sithatha umboko weplanga ebesiwukhankanye ngaphambili. Sinokuyixabisa yonke into ngeenkcukacha eziphezulu kwaye siyichukumise, ukuze sikuxabise ukuthungwa kwayo.
Ubume obubambekayo, kwelinye icala, asinako ukubamba ngeso lenyama, kodwa sinokuyibona ifakwe kwidijithali kwiscreen. Abaqulunqi abaninzi bangaphakathi basebenzisa olu hlobo lwemizobo ukuhombisa indawo yangaphakathi kunye nengaphandle. Ukongeza, basebenzisa iinkqubo ezifana nePhotoshop ukulungelelanisa ukukhanya kunye nombala weziqwenga, ngale ndlela ukuze zibe yinyani ngokusemandleni.
Ngokwemvelaphi yazo, zikwahlulwe zibe ziinxalenye ezimbini; ukuthungwa kwendalo kunye nokwakheka okwenziweyo.
Ubume bendalo, njengoko igama layo libonisa, lithetha ukuba eli qela lezinto zokuthunga livela ngokuthe ngqo kwindalo., njengoko kunjalo ngokhuni, ulusu lwesiqhamo, igobolondo lokutya okuthile, njl.
Kunoko, izinto ezenziweyo zikholisa ukudalwa kunye namanye amacandelo okwenziwa kwawo, ingaba yimeko yohlobo oluthile lwe-tile, apho icandelo lombala walo liye laziswa.
Kukwaphawulwe ukuba kukho elinye iqela elincinci elaziwa ngokuba yi-textile textures, zezo textures zivela kwi-textile, yaye sizifumana kwezinye iimpahla esizinxibayo, okanye kwanakwezinye izinto zasekhaya ezinjengamakhushini okanye iibhedi.
Elona candelo linika umdla kwimizobo yeyokuba zizinto apho sinokuyixabisa ngokulula imvakalelo yokuchukumisa xa ubamba kwaye uziva into nganye eyiqambayo.
Isifundo: Uyila njani iGold Texture kwiPhotoshop
Inyathelo 1: Uxwebhu
Into yokuqala esiya kuyenza kukuqhuba i-Photoshop, kwaye emva koko siza kwenza uxwebhu olutsha. Kule meko, uxwebhu inokuqulatha umlinganiselo ofana no 800 x 800 px.
Nje ukuba sikuxwebhu, kufuneka sibize umaleko kwaye siwunike ngasemva.
Kumaleko angasemva, xa sele siyiqambile igama, kufuneka sikhethe kuphela umbala ongasemva, kulo mzekelo iyakuba yigolide, kulo mzekelo siyakufaka isicelo. ikhowudi yeprofayile yombala ilandelayo: #EABE3F.
Okulandelayo, xa sele sinombala wegolide okhethiweyo, kunye nekhowudi yayo, siya kusebenzisa ukhetho lwebhakethi yepeyinti ngasemva.
Inyathelo 2: Yongeza ezinye izinto
Kwimeko apho sele sinemvelaphi yethu yegolide elungisiweyo, siya kusebenzisa into yesibini kuyo, ngenjongo yokuyila into enemvelaphi yegolide.
Ukwenza oku, siya kukhetha isixhobo sokubhaliweyo, kwaye siya kubhala isicatshulwa esisifunayo, sinokuba yintloko yochungechunge lwe-animated okanye i-movie, okanye igama elitsala ingqalelo yethu.
Sakuba sinelizwi elibhaliweyo, kubalulekile ukuba sihlengahlengise umaleko apho igama lethu lifumaneka khona, nje Kufuneka sinqakraze-ekunene kumaleko kwaye emva koko iwindow izakuvela apho sizakukhangela ukhetho umaleko we-rasterize.
Inyathelo lesi-3: Ngenisa ukwakheka kwakho kwaye uhlengahlengise
Umthombo: Pelayo Gonzalez
Xa sele siyile igama kunye nesixhobo sokubhaliweyo kwaye siyirasterized. Siza kugqibezela ukwenza i-texture yethu ngezinto ezithile ezinjengokukhanya kunye nokwahlukileyo. Unokufaka kwakhona i-gradient eneentlobo ezimbini ezahlukeneyo zegolide, enye ibukhali kunomnye. Ngale ndlela, uya kuba nokulawulwa kakuhle kwaye kuyilwe ukuthungwa.
Nje ukuba siyilwe, siqhubela phambili ngokuyingenisa kwaye ngale ndlela, siya kuthiya ngokutsha umaleko apho ukuthungwa kubekwe khona njengeTexture. Ngale ndlela, siyakushiyeka sinemigangatho emithathu enamagama okubhaliweyo, imvelaphi kunye nokuTeleka.
Inyathelo lesi-4: Faka isicatshulwa kwisicatshulwa
Nje ukuba sidityaniswe ukwakheka kwethu, kufuneka nje siguqule isicatshulwa esisenzileyo, sibe sisicatshulwa esinokwakheka okufanayo njengemvelaphi yethu.
Ukwenza kube nomdla ngakumbi ngale ndlela. Ukwenza inyathelo elilandelayo, kufuneka senze kuphela cofa kuMaleko wokuTeleka kwaye siya kukhetha ukhetho yenza imaski yokusika.
Ngokunqakraza kolu khetho,Inkqubo ngokwayo ithatha inkathalo yokuguqula okubhaliweyo umbala ofanayo kunye nokumila njengokuthungwa okwenzileyo kwaye wasebenzisa njengemvelaphi. Ngumsebenzi olula kakhulu ukuba Photoshop inoxanduva lokusombulula loo mbuzo ngaphantsi kwemizuzu emibini.
Inyathelo lesi-5: Thumela ngaphandle ukuthungwa okanye ukwakheka
Ukugqiba esi sifundo, kufuneka sikhuphe kuphela oko sikuyileyo, ngokukhethekileyo kwifomathi yeJPG kwaye kumgangatho ofanelekileyo wokujongwa kwiscreen.
Kufuneka nje siye kukhetho Oovimba kwaye nqakraza kukhetho ukuthumela ngaphandle, udweliso lwenkqubo luyakuvula ifestile kuwe ukuba ukhethe ifomati kunye nemveliso yendlela.
Yiyo loo nto, ngoku ungayonwabela ukuthungwa kwakho kwegolide.
IiWebhusayithi zokukhuphela imizobo
Ngaphandle kokuba liphepha lewebhu apho unokufumana khona imifanekiso yasimahla, unokufumana kwakhona ukuthungwa okumangalisayo okusekwe kwimibala oyifunayo, umzekelo, ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa igama elimhlophe xa ukhangela, iwebhusayithi kwangoko. izakukubonisa ezinye iindlela zokuthungwa ezimhlophe onokuzifumana zinika umdla kakhulu. Ukongeza, imifanekiso inomgangatho olungileyo kakhulu.
Liphepha lewebhu elifanelekileyo ukuba ujonge ukwenziwa kwemisebenzi yeprojekthi enamacala amabini okanye amathathu. Ineendidi ezininzi zeendlela ezahlukeneyo zokwakheka, umzekelo, unokhetho lokujonga izinto ezininzi zendalo ezinjengeentyatyambo okanye iinkuni ngokwazo. Nje ukuba ufumane le mizobo, ungazibandakanya kwiifomathi okanye kwimidiya ye-intanethi. Okanye ukuba uyila, umzekelo, ngaphambili nangasemva kwencwadi okanye iqweqwe lemagazini, kwaye ufuna ukuthungwa okuthile, unokuyisebenzisa ngeendlela ozifunayo nangexesha ofuna ngalo. Ngokuqinisekileyo lukhetho olunomdla.
NgeTexturify, unokufumana ukuthungwa okungapheliyo kwasimahla ngayo yonke indlela. Ikwanako nokuba nethuba lokuzifumana ngendlela yeegradient ezinomdla kakhulu. Umba othanda kakhulu olu hlobo lobutyebi, kuba unokuzisebenzisa kuyo nayiphi na iprojekthi, nokuba yeyiphi na isimilo.
Ukongeza, iwebhusayithi ngokwayo inombutho ogqwesileyo wezinto kunye nezixhobo ezinikezelayo, ngale ndlela, uya kuba nakho ukufumana ithala leencwadi elibanzi elinezixhobo ezifanayo ngokunjalo. Ngamafutshane, awungekhe uyiphose le webhusayithi ingakholelekiyo apho unokuziva ukhululekile ngezinye zezinto zayo.
I-Stockvault luhlobo lwebhanki yemifanekiso kodwa yokwakheka, ukuze uyiqonde ngcono, lihlabathi lemizobo ngendlela yephepha lewebhu. Unazo zonke iintlobo zezinto onokuthi uzidibanise kakuhle kuyilo lwakho. Ukongeza, nganye kuzo isimahla, ngoko awuyi kuba nayo nayiphi na ingxaki yokukhuphela.
Ikwaziwa ngokuba yibhanki yemifanekiso yemixholo efana nembonakalo yomhlaba. Ngaphandle kwamathandabuzo, ibhanki yemifanekiso engahoywanga kwaye inokuba ngumhlobo wakho omkhulu ngamaxesha amaninzi.
Kwaye ukugqiba olu luhlu lwemithombo yewebhu ukukhuphela ukuthungwa, sifumana ukuthungwa kwe-ninja. Luhlobo olufanayo kukhetho ebesilubonisile ngaphambili, kuba ikwayibhanki yemifanekiso. Kodwa ngeli xesha, kunye nezinto ezinomdla ngakumbi.
Kule webhusayithi, unokufumana zonke iintlobo, ukusuka kwiminwe ukuya kwizityalo kunye nendalo. Ukongeza, ngamnye kubo nabo bakhululekile. Ngamafutshane, ungahlali ngaphandle kokuzama, kuba awuyi kuba nasizathu sokongeza kuyilo lwakho Uyilo kunye nokuthungwa okunobuchule, ezinokuthi zithande ngokwanelisayo iiprojekthi zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Ungawufumana njani umzobo wegolide kwiPhotoshop